PSJTV | झन्डा र पुत्ला जलाएर समस्या सुल्झँदैन – दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि नेपाली राजदूत
झन्डा र पुत्ला जलाएर समस्या सुल्झँदैन – दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि नेपाली राजदूत
शुक्रबार, ०४ मङि्सर २०७२ पिएसजे न्युज
० नेपाल र भारतबीच एकाएक असमझदारी बढेको परिवेशबीच पुन: समझदारीको विकास हुन थालेको हो ? – नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जनताको हृदय–हृदयबीचको सम्बन्ध हो । जनताबाटै निर्देशित हुने र भइरहने सम्बन्ध भएकाले बेला–बेला उतारचढाव आएजस्तो हुनु स्वाभाविक छ । यतिबेला अनपेक्षित घटनाका कारण नेपाली जनताले जसरी दु:ख पाए, यो अवश्य पनि हामी सबै द्रवीभूत हुनुपर्ने सन्दर्भ हो । तर, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटना हुन्छन्, असमझदारी देखापर्छन् भनेर मन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो घटना विकसित भएपश्चात् काठमाडौं पुगेर म नयाँदिल्ली फर्किएपछि भारतीय उच्च तहका नेताहरूसँग छलफल गरेँ । उहाँहरू पनि जनताले दु:ख पाउनुहुन्न भन्ने सोचमै रहेको पाएँ । सप्लाईमा आएको अवरोधको कारण नेपाली जनताले भोग्नुपरेको दु:खलाई छिटोभन्दा छिटो सहजीकरण गर्ने, खासगरी हस्पिटल सप्लाई, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएर नेपाली जनताको दैनन्दिनी सहज तुल्याउनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको धारणा छ । तर, यसमा के भइरहेको छ भनेर उच्च राजनीतिक तहले नै पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । असमझदारी बढाएर कसैको हित नहुने हुनाले समझदारी बढ्ने आशा मैले लिएको छु । ० सुरुमा ठप्पै पारिएको नाकाबाट पछिल्लो चरणमा केही सङ्ख्यामा सामान बोकेका ट्रकहरू नेपाल प्रवेश भएका छन्, अब पूर्ववत् ढङ्गबाट नाका खुल्न सक्छ, हो ? – तत्काल पूर्ववत् ढङ्गले नाका खुलिहाल्छ भन्न नसकिए पनि निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने होइन । भारतको बिहारमा निर्वाचन भएकाले पनि सुरक्षाको कारण खुला सीमा सिल गर्नुपरेको भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ । पहिले–पहिले सामान्य अवस्थामा पनि चुनावको बेला यस्तो गरिँदै आएको हो । तसर्थ, केही संवेदनशील नाकाबाहेक अन्यबाट हस्पिटल सप्लाई, ग्यास, पेट्रोलजस्ता सामग्री प्राथमिकताका साथ आपूर्ति हुनेमा म विश्वस्त छु । तर, हाम्रो ६० प्रतिशतजति आपूर्ति रक्सौल नाकाबाट हुनुपर्ने भएकाले तत्काल स्थिति सहज हुन सक्छ भन्नेचाहिँ होइन । किनकि, रक्सौल नाकातर्फको भागमा नेपाल सरकारको गम्भीर प्रयत्नका बाबजुद आन्दोलनकारी पक्षलाई मनाउन नसकिएकाले विषमावस्था कायम रहेको हो । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निकै गम्भीर प्रयास गरेका हुन्, तर चाहेजस्तो नतिजा आइसकेको छैन । यसले गर्दा जनताले दु:ख झेलिरहनुपरेको छ । ० वीरगञ्जको नाका नखुलेसम्म आपूर्तिमा व्यवधान रहने निश्चित छ, यसलाई खुलाउन कुनै विशेष प्रयत्न भएको छैन ? – हो, वीरगञ्जको नाका नखुलेसम्म आपूर्तिमा असहजता रहिरहन्छ । दिनहुँ तीन सय ट्रक आवश्यक पर्नेमा सबै नाका गरेर चानचुन चालीस–पचास ट्रक मात्र भित्रिने अवस्था रहेपछि अभाव त हुने नै भयो । तसर्थ, अहिले हाम्रो ध्यान वीरगञ्ज नाकालाई पनि कसरी सहज पार्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालको तर्फबाट उक्त नाकामार्फत भारततर्फ असुरक्षा हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नसक्नेमा हामीले भारत सरकारलाई अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै आश्वस्त पारेकै हौँ । समस्या त हाम्रैतिरबाट पनि भइरहेको छ नि । यतिबेला आन्दोलनमा रहेका हाम्रा आन्दोलनकारी मित्रहरूलाई जनतालाई सास्ती हुने यस्तो आन्दोलन नगर्न हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ । जनताले योभन्दा बढी दु:ख पाउनु भनेको भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा शक्तिलाई नराम्रो असर पुग्नु हो भन्ने सम्बन्धित सबैले बुझ्नैपर्छ । सरकारले उदारताका साथ उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्दै छ भने अब किन यसरी नाका छेक्ने काम गरिरहनुपर्छ र ? असन्तुष्ट पक्षका नेतागणले परिस्थितिको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्दै सहज वातावरण सिर्जना हुने माहोल निर्माणार्थ आवश्यक पहलकदमी लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास हामीले लिएका छौँ । ० तपाईं काठमाडौंबाट दिल्ली फर्किएलगत्तै जुन मात्रामा नाका खुल्यो, यसमा खास कसको भूमिका छ ? – सरकारले आफ्नो तहबाट प्रयास गरेको छ भने हामीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीरतम् ढङ्गले खटिरहेका छौँ । अहिले व्यक्तिगत भूमिकाको कुरा गरेर जश–अपजशको भागीदार बन्नेतिरभन्दा पनि स्थिति सहज तुल्याउनेतर्फ लाग्नु जिम्मेवार सबैको कर्तव्य हो । आगो लागेको बेला कसले आगो झोस्यो भनेर खोजीनिती गर्नेभन्दा पनि आगो निभाउनेतिर लाग्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ । अब यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्ने सोचका साथ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको अत्यन्त ऐतिहासिक छ । सम्बन्धको गहिराई मनन गरेर पूर्ववत् अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था फर्किनुपर्छ, सानातिना असमझदारीकै कारण यो स्तरको दु:ख–कष्ट जनताले झेल्नुपर्ने परिस्थिति आउनुहुँदैन भन्नेमा दुवैतिरका उच्चपदस्थ नेता सचेत रहनुपर्छ । ० तपाईंले नेपाल र भारत दुवैतिरका उच्चपदस्थ नेताहरूसँग बारम्बार संवाद र अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ, यस आधारमा के बुझ्नुभयो तपाईंले कि यस्तो असमझदारी किन–कसरी जन्मिएको होला ? – जसरी परिवारमा कहिलेकाहीँ झमेलाहरू पैदा हुन्छन्, कुनै सदस्यमा अनेक तरङ्ग उत्पन्न भई जसले परिवारलाई नै खल्बल्याइदिन्छ, देश–देशबीचको कुरा पनि यस्तै हो । यसलाई अलौकिक र अनौठो भनी बुझ्नुहुँदैन । जहाँसम्म अहिलेको परिस्थति कसरी निम्तियो भन्ने सवाल छ, यसलाई धेरै खोतलेर चर्काइरहनुभन्दा बिर्सिएर मत्थर पार्नेतिर लाग्नुपर्छ । झर्रो राष्ट्रवादको कुरा गरेर मात्र काम चल्दैन, किनकि हामी त भूपरिवेष्ठित मात्र नभई छिमेकी भारतबाट मात्रै तीनतिरबाट घेरिएका छौँ । उत्तरतिर जटिल प्रकारको हिमाली क्षेत्र छ । यो त यथार्थ हो नि । यस्तोमा अनेक असम्भव तर्क गर्दै उताबाट तेल झिकाउँछौँ, त्यताबाट गर्छौं भन्नेहरू पनि देखिए । भावुकतावश असम्भव कुरा मात्र गरेर त गर्जो टर्दैन । चाहनेबित्तिकै हल हुने समस्या हो र यो ? हो, विकल्प खोज्नै लागिपरे आगामी दश, बीस, पच्चीस वर्षमा विकल्प तयार हुन सक्ला, तर अहिलेको आवश्यकता त पूर्ति गर्नुपर्‍यो नि । मैले भारतमा उच्च तहमा भेट गर्दा साह्रै नमिठा क्षण पनि व्यहोर्नुपर्‍यो । भारतका झन्डा जलाइएका, भारतीय उच्च नेताका पुत्ला जलाइएका, कतिपय नेताहरूबाटै अशिष्ट टीकाटिप्पणी गरिएका कुरा त्यहाँ उठे । यथार्थको धरातल र परिस्थिति नबुझी त्यसरी रियाक्ट हुनु वास्तवमा जसलाई पनि चित्त दुख्ने विषय हो । सामान्य एउटा विद्यार्थीले पनि मोबाइल झिक्यो, जथाभावी अडियो र भिज्युअल रेकर्ड गर्‍यो अनि अपलोड गरिदियो । क्षणभरमै त्यो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएर उनीहरूकहाँ पुग्दोरहेछ । छलफलको क्रममा त्यस्ता अराजक प्रतिक्रियाहरू देखाउँदा म त नाजवाफजस्तै हुन पुगेँ । भारतलाई चिढ्याउने, लज्जित पार्ने खालको यस्ता प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झाउँछ भन्नेमा हामी सतर्क हुनुपर्छ । ० अनाहकमा यत्रो कष्ट झेल्नुपरेपछि त्यति रियाक्ट गर्न त पाउनुपर्‍यो नि आमजनताले, होइन र ? – सर्सरी भन्नुपर्दा यो स्वाभाविक नै हो । एक लिटर तेलका लागि तीन किलोमिटरको लाइन लाग्नुपर्दा जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुनुलाई अन्यथा पक्कै भन्न नमिल्ला । तर, परिस्थितिको संवेदनशीलता मनन गरी संयम धारण गर्न सके हामीलाई फाइदा नै हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो । आमजनताकै तहमा ओर्लिएर नेताहरूले समेत अशिष्ट र अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनुचाहिँ अस्वाभाविक र विडम्बनाकै कुरा हो । एकातिर सहजताका लागि प्रयास हुने अर्कोतिर माहोल बिगार्दै जाने हो भने त हामी कहाँ पुग्छौँ र ? ० अलिकता नाका खुलेजस्तो भई केही ट्रक सामान मुलुक भित्रनेबित्तिकै भारतले घुँडा टेक्यो भन्ने प्रकारका समाचार पनि सम्प्रेषित भए नि, के भन्नुहुन्छ ? – यही त भनेको नि † सोच हाम्रो सकारात्मक हुनुपर्छ, नकारात्मक सोचले काम–कुरा बिगार्छ । कतिपय दु:खका कुरा पनि भुल्नुपर्दछ, बेवास्ता गर्नुपर्दछ । नकारात्मक कुरालाई बिर्सेर भारत र नेपालको जन–जनमा रहेको ऐतिहासिक र आत्मीय सम्बन्धका आधारमा व्यवहार गर्ने चेष्टा हनपर्छ । छिमेकका हामी दुई अलग–अलग स्वाधीन र स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हुनुको नाताले त्यही किसिमको मित्रवत् सम्बन्धलाई बढावा दिनुपर्छ । धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीति–रिवाज सबै कुरा मिल्ने देश भनेको एकाघरका दाजुभाइसरह हो । यस्तोमा यदाकदा ठासठुस हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ । त्यसले झन् आत्मीयता जगाउँछ । यथार्थ धरातलमा उभिएर हामीबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्नुपर्छ, न कि एकले अर्कालाई अपमानित गर्ने, होच्याउने व्यवहारले कसैको हित गर्छ † ० नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सीधै वार्ता हुनुपर्ने कुरा पनि आएको छ, यस्तो सम्भावना कति छ ? – यस्तो हुनु अत्युत्तम् नै हुनेछ र दुई नेताबीच वार्ता नहुने या नहुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिन म । म स्वयम् पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई भेट्ने प्रयास गर्दै छु । भेटेर नेपाली जनताले अनाहकमा झेल्नुपरेको दु:ख र अन्य समसामयिक विषयमा वार्तालाप गर्ने प्रयासमा छु । सम्भवत: छिट्टै यस्तो भेटघाट हुनेछ र त्यसबेला नेपाली जनताको तर्फबाट, नेपाल राष्ट्र र नेपाल सरकारको तर्फबाट कुराहरू राख्नेछु । मैले सङ्केत पाएको छु कि प्रधानमन्त्री मोदी नेपाली जनताले पाउनै नपर्ने दु:ख पाएकोमा अत्यन्त दुखित हुनुहुन्छ । यो हुनु नपर्ने कुरा भयो, यसलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्दछ, माहोल सहज तुल्याउनुपर्दछ भन्ने सदासयता उहाँले राख्नुभएको मैले सन्देश पाएको छु । ० त्यसो भए नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर भई पुन: पुरानै अवस्थामा फर्केला त ? – यसको विकल्प नै छैन । यस्तो हुनैपर्छ र हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।-विक्ली नेपाल
हायात होटेलबाट सरकारको सेयर ३९.७७ बाट ९.०१ प्रतिशतमा झारियो, तर सरकार मौन!
काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले स्वतन्त्रताका विषयमा हस्तक्षेप गरे पनि दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने काममा भने हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताएका छन । सेन्टर फर डेमोक्र्याटिक इञ्जिनीयर्स नेपाल (सिडेन) ...
काठमाडौं : पार्टीलाई गुटमुक्त बनाउँदै विधि र विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएको चार वर्ष पूरा हुन लागेको छ। विधानको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग नगर्ने हो ...
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा ...